VPN: Waa maxay sidee baanse ku dooran karaa midka ugu fiican baahideyda? | Laga soo bilaabo Linux
Dad badan oo isticmaala internetka waqti yar, sababo kala duwan awgood, waxay u muuqdaan inay doonayaan la soco heer sare oo ah «protección y privacidad», ha ahaato guriga, shaqada ama meel kasta. Tani waxay badanaa isticmaal ka mid ah «VPNs», kuwaas oo aan ka badnayn «Redes Virtuales Privadas». Weedho ku qoran Ingiriis, ayaa lagu qoray «Virtual Private Network» loona soo gaabiyo «VPN».
Tanina, si hufan sababta a «VPN» abuuraa xiriir sugan gudaha shabakadaha bulshada, noqo isku xir «WiFi» ee gaadiidka dadweynaha, dhisme sida huteel, barkadda dabaasha ama makhaayad, ama shabakad gaar ah sida gurigeenna ama shaqadeena. «Conexión segura» taas oo u oggolaaneysa taraafikadayada xogta inay ku dhex wareegaan adeegeyaal si wanaagsan loo qeexay «cifrado» isku mid ah, si aan ugu qarino howlaheena internetka, marka lagu daro bixinta «protección» la soo dersay khataraha badan ee webka.
Ha iloobin taas «VPNs» Badanaa siyaabo badan ayey waxtar badan u leeyihiin. Taasi waa, kaliya maahan bixin «protección y privacidad», labadeenaba iyo qalabkeena, laakiin iyaguna way na caawin karaan ka adkaato suurtagalnimada «restricciones o censuras» shirkadaha internetka bixiya ama dawladaha qaarkoodiyo na sii «acceso» meel kasta oo aad tagto bogagga internetka ee kala duwan taasi juquraafi ahaan waxaa hor istaagi kara adeeg bixiyayaashooda ama sharciyada dalalkooda.
Intaa waxaa dheer, bixiyeyaasha qaarkood ee «VPNs» Si wanaagsan loo dhisay, badiyaa waxay leeyihiin liis dheer oo server ah oo kala duwan «anchos de bandas» la heli karo kuwaas oo bixin kara heerar kala duwan oo khibradaha isticmaalaha ah iyadoo loo eegayo baahiyaha ay u baahan yihiin. Sababaha sababta, waxaa badanaa laga helaa maanta meelo badan; laga soo bilaabo ururada waaweyn ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ilaa qofkasta gurigiisa, si loo helo marin fog oo aamin ah oo loo maro degel kasta oo bulshada ah ama kaabayaasha gaarka loo leeyahay.
1 Sidee loo doortaa VPN-ka ugu fiican baahiyaheyga?
1.1 Ka doorbid mid ku saleysan aaminaad iyo daahfurnaan
1.2 Ha ku sasabin xayeysiinta marin habaabinta ah
1.3 Falanqee goobtaada juqraafi ama xukun
1.4 Iska ilaali inaad doorato mid diiwaan gelinaya howlahaaga
Sidee loo doortaa VPN-ka ugu fiican baahiyaheyga?
In kastoo cidna ma jirto «VPN» qumman, tan iyo dhammaantood waxay leeyihiin ugu yaraan xoogaa xaddidaad ama xaddidaad ah, taas oo badanaa muhiimad gaar ah u leh dad kala duwan, waxa ugu muhiimsani waa suurtagalnimadeeda inay damaanad qaado kuweenna «protección y privacidad». Sidaa darteed, talooyinka ama waxyaabaha laga fiirsado hoos waxay noqon doonaan hage fudud laakiin faa iido leh oo lagu xisaabtamo.
Ka doorbid mid ku saleysan aaminaad iyo daahfurnaan
Had iyo jeer mudnaan sii Adeegga «VPN» taasi waxay kuu damaanad qaadaysaa inaad noqoto mid la isku halleyn karo iyo in aysan wax u dhimeynin xogtaada, xitaa haddii aad kaliya u isticmaasho adeegga arrin fudud oo dhul-furid ama arrimo kale.
Ha ku sasabin xayeysiinta marin habaabinta ah
Iska ilaali inaad doorato «Proveedor de VPN» ku saleysan raadinta fudud iyo natiijooyinka laga helo internetka, kuwaas oo marar badan uun soosaara nooc ka mid ah suuq-geynta loo yaqaan «publicidad nativa» kaas oo ka soo jeeda «programas de afiliados» iyo faa'iidooyinka ganacsiga, taas oo ah xadgudub iyo dhibaato weyn oo ka dhexjirta gudaha bixiyeyaasha VPN.
Falanqee goobtaada juqraafi ama xukun
Xusuusnow in sanadihii la soo dhaafay kiisas badan oo ka mid ah «programas de vigilancia masiva» ee dawladaha kala duwan ee dalal gaar ah oo adduunka ah, iyo shirkado waaweyn oo adduunka oo dhan gaadha sidoo kale. Sidaa darteed, iska ilaali adeegsiga adeeg saldhigeedu yahay dalal la sheegay ama ku hoos jira dawlado la sheegay ama ka tirsan ururadaas si toos ah ama si dadban ugu lug leh, si looga hortago inay u nugul yihiin «registros ilegales» iyo ballanqaadyo sharciyeed oo lagu sameeyay magaca «seguridad nacional» ama waxqabadyo ganacsi oo ka socda berriga.
Iska ilaali inaad doorato mid diiwaan gelinaya howlahaaga
Xulo adeeg si gaar ah u sheegaya «que no mantienen registros», ama ku guuldareysato taas, noocyada diiwaanada ee aan hayn. Adeegyo badan oo ka «VPNs» waxay sheeganayaan inaysan xafidin diiwaanada, laakiin haddii ay sidaas sameeyaan, fadlan naftaada u xaqiiji shuruudaha iyo siyaasadaha asturnaanta ee bixiyeyaashaas.
Ugu dambeyntii, iyo soo koobid, maskaxda ku hay qodobadan kale:
Hababka lacag bixinta iyo shuruudaha: Ka fogow bixiyeyaasha weydiista xog badan oo aqoonsi xasaasi ah.
Hab maamuuska la adeegsaday: Ka doorbido kuwa adeegsada baratakoolka bilaashka ah iyo kan furan, si markaa ay u hubin karaan una horumarin karaan khubarada amniga. Kuwa la jaan qaada ama ku saleysan FuranVPN ayaa ah kuwa ugu doorbid badan, iyo PPTP kuwa ugu yar ee ku habboon asturnaanta.
Lahaanshaha DNS iyo IPV6: Xulo Adeegga VPN ee ilaaliya IPV4 ama IPV6 DNS server u gaar ah, oo bixiya cinwaan cusub oo ah VPN-gaar ah IPv6 oo kaliya laga heli karo iyada oo loo marayo tunnelka VPN.
Sirta la adeegsaday: Xullo Adeeg VPN oo leh xog qarin iyo gacanqaad xoog leh. Hubso in borotokoolka la bixiyay uu leeyahay heerka sirta saxda ah ee la heli karo.
Inuu doorto ugu fiican VPN waxaa jira degello internet oo badan oo la heli karo, laakiin Waxaan kugula talineynaa 2-da websaydh ee soo socda, midna ingiriisi midka kalena gudaha Español taas oo isbarbardhig fiican ku samaysa adeeg bixiyayaal badan «VPNs» jira si loo doorto midka ugu habboon baahideena.
Sideen si fudud ugu soo gabagabeyn karnaa, las «VPNs» aad ayey faa'iido u leeyihiin, maadaama waxyaabo badani ka mid yihiin qarin macluumaadka taraafikada ee noo muuqda «Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider - ISP)»; tagitaanka kaliya ee aragtida, in aan la aasaasay xiriir la a Server «VPN», wax kale ma jiraan. Sidaas oo kale in dhammaan xogteenna ay ku dhex wareegaan min gees ilaa dhammaad, iyagoo kasbanaya «protección y privacidad».
Oo yeynaan iloobin, in la helo faa'iido la sheegay markaad isticmaaleyso a «VPN» ku-dallacayaasha cinwaan IP ah oo ka duwan kan ay bixiso ISP-ga, si aan u ilaalino aqoonsigeena dhabta ah ee internetka markasta. Markaa halka aan u socono ma oga in taraafikadayadu ka timaaddo goobtayada dhabta ah, laakiin inay ka timaaddo wajiga Server «VPN».
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato VPN-yada, waxaan kugula talineynaa dhex galo mawduuca «Tunneling de las VPNs» iyo «Protocolos VPN» waxaa loo adeegsaday tikniyoolajiyaddaas. Ugu dambeyntiina uguyaraan sababtaan, had iyo jeer way fiicantahay inaad isticmaasho, sida caadiga ah, tiknoolajiyada bilaashka ah ama furan, sidaa darteed adiga waxaan kugula talineynaa isticmaalka «OpenVPN» meel kasta oo ay suurtagal tahay, sida tikniyoolajiyaddan iyo / ama adeeggu waxay bixiyaan dheelitirka ugu fiican ee u dhexeeya xawaaraha iyo amniga.
Haddii aad ka heshay daabacaadda, noo sheeg waxa adeeg ah «VPN» ma isticmaashaa ama kugula talineysaa iyo sababtee?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » VPN: Waa maxay sidee baanse ku dooran karaa midka ugu fiican baahideyda?
Waa maxay xirmooyinka EPEL?